अष्ट्रेलियाले दियो भारतलाई २७३ रनको लक्ष्य, सिरिज कसले जित्ला? - Everest Dainik - News from Nepal
अष्ट्रेलियाले दियो भारतलाई २७३ रनको लक्ष्य, सिरिज कसले जित्ला?
काठमाडौं, फागुन २९ । भारतविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा अष्ट्रेलियाले २७३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाउँदै २७२ बनायो ।
याे पनि पढ्नुस वान डे सिरिजः भारतको टिममा ४ परिवर्तन, अष्ट्रेलियालाई बलिङको मौका